Daawo: Waxa ay si dhab ah u go’aansadeen in qarashkii ku bixi lahaay arooskooda ay ugu deeqaan walaalahood abaartu ay saameysay – Kismaayo24 News Agency
Daawo: Waxa ay si dhab ah u go’aansadeen in qarashkii ku bixi lahaay arooskooda ay ugu deeqaan walaalahood abaartu ay saameysay
by Tifaftiraha K24 16th March 2017 071
Iyadoo abaar xoogan ay ku dhufatay gobolada wuqooyga koonfurta iyo bartamaha soomaliya ayaa waxaa ay abaartu saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool gobollada dalka soomaliya.
Gobolka mudug waxa uu kamid yahay gobollada dalka ee abaartu ay sida xoogan u saameysay waxaana jira boqolaal qooysas ah oo kasoo barakacay deegaanadooda iyagoo soo gaaray magaalooyinka ugu dhaw oo ay ka heli karaan biyo baad.
Magaalada galkacyo waxa ay kamid tahay magaalooyinka gobolka mudug oo ay kusoo barakaceen kumanaan qoysas ah oo baadiyaha kasoo cararay waxaana dadkaasi ay daganyihiin duleedka magaalada.
Hadaba waxaa dhacday arin qariib ku ah dhaqanka soomalida iyadoona tani ay tahay mid ka tarjumeysa isu naxariisashada iyo is gacan qabadka xiliga dhibta adag ay jirto.
Sida dhaqanka iyo caadada u ah bulshada soomaliyeed arooska waxaa lagu bixiyaa dhaqaalo aad u badan iyadoona farxadda arooska ay la cuno cunto noocya kala duwan leh si loo muujiyay farxadda reerka cusub ee aqal galaya.
Arooska iyo aroosada Liibaan iyo Caasho waxay go’aansaseen inay kharashkii arooskooda ku bixi lahaa inay ugu deeqaan dadka ay abaarta ku hayso duleedka magaaladda Galkacyo waxayna tani noqotay mid hadal heynteeda qabsatay baraha bulshada.
Dhabtii waa go’aan qiirad leh iyo damqasho ay ku jirto waxaana lamaanahan ay ka muuqato shacaa’irta islaamka ay muujiyeen in naxariista aysan weli ka dhamaan beni’aadamka gaar ahaan umadda muslimiinta ah oo alle uu amray in ay isu naxariistaan si ay u helaan naxariista alle weyn subxaanahu watacaala.
Lamaanahan qeyrka badan waxa ay farxadda arooskooda ay la wadaageen boqolaal qoysas ah oo kusoo barakacay magaalada galkacyo iyagoona qarashkii arooskooda ku bixi lahaay ay raashin iyo cunto ugu soo iibiyeen dadka xiligaan baahida weyn u qaba.
Waa dhacdo naadirka ku ah dadkeena soomaliyeed ee waqtiyada munaasabaddaha iyo aroosyada ku bixiya lacago maan gal aan aheyn .
Dhacdo tan oo kale ah ayaa horay uga dhacday wadanka turkiga kadib markii lamaano xiliga arooskooda ku casuumay kumanaan qaxooti suuriyaan ah oo dalkaasi ku nool iyagoona la wadaagay farxadda arooskooda.
TOP NEWS: Dhageyso: In kabada 75 xildhibaan ayaa saxiixday mooshin laga keenay madaxweynaha maamulka…..
Daawo: Muxuu ku saabsanaay kulan muhiim ah oo nairobi ku dhexmaray axmad madoobe iyo xildhibaanada jubbaland?
”Warbixin” Mogadishu maahan Magaalo loo siman yahay WQ Wasiirka Madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad
admin 30th March 2016 30th March 2016
DHAGEYSO : Warkii habeenimo ee Radio VOS 25-11-2015 by Cumar Laki Man
Ciidamadda Kenya oo qarxiyey Qarax lagu aasey meel kamid ah Magaaladda……….